Kuxwayiswa ngokhilikithi ngobusuku bukaNcibijane | News24
Kuxwayiswa ngokhilikithi ngobusuku bukaNcibijane
Johannesburg – Iziphathimandla zedolobha laseGoli sezikhiphe isexwayiso emphakathini mayelana nokuqhunyiswa kokhilikithi uma sekuhlukaniswa unyaka.
“Kunemithetho okumele ilandelwe uma kusetshenziswa okhilikithi.
Empeleni abavumelekile noma yinini futhi noma yikuphi kodwa uma uma kunemigubho ethile bayavunyelwa ukuthi basetshenziswe ngendlela ehambisana nokukulandela umthetho,” kusho okhulumela leli dolobha uVirgil James ngokubika kweThe Star.
Uveze ukuthi ngobusuku obandulela uNcibijane okhilikithi bazovunyelwa phakathi kwezikhathi u-11:00 kusihlwa no-01:00 ezintatha zikaNcibijane kanti nantambama ngobusuku bukaNcibijane kusukela ngo07:00 kusihlwa kuze kushaye u-10:00 ebusuku.
OLUNYE UDABA: Ingane ishumpuke iminwe ilayitha ukhilikithi
UJames uthe kubalulekile ukuthi abantu abazobe beqhumisa okhilikithi bacabange indaba yomakhelwane nezilwane.
“Abantu kumele baqinisekise ukuthi bathenga okhilikithi babo ezitolo ezihloniphekile ngoba kungenzeka bangasebenzi ngendlela efanele uma bethengwe emgwaqweni nokuyinto engabeka impilo yabo engozini,” esho.
Uphethe ngokuthi kubalulekile ukuthi abantu bahloniphe izikhathi zokuqhunyiswa kokhilikithi ngoba uma bengazihloniphi bangazithola bebhekana nengalo yomthetho.